Loved Sanibonani nonke
unyaka 1 9 edlule #724 by Leocha1
Ngingumusha lapha futhi ngithole le website izolo.
Ngesikhathi eside kakhulu ngingumsebenzisi oziqhenyayo we-flight simulator 2004, futhi ngisenokuningi ukuthola.
Ngifinyelele leli sayithi ngemuva kokuthi ngihambe ngezindiza zamahhala ezingcono kakhulu.
Kwakumangalisa lokho engikutholile lapha.
Ngakho-ke ngingathanda ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngekhwalithi ephakeme yemikhiqizo yamahhala.
unyaka 1 9 edlule #726 by Dariussssss
Enye enkulu ngiyabonga ngawo wonke amazwi anomusa. Indlela yami yokuza lapha yayifana kakhulu neyakho. Ngise-FSX manje kodwa isikhathi eside kakhulu, ngangibuye ku-FS2004, engekho nhlobo.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze wenze ukuhlala kwakho lapha ngangokunokwenzeka ngangokunokwenzeka.
Nalapha futhi, ngiyabonga kakhulu futhi ngamukelekile.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Leocha1
unyaka 1 9 edlule #741 by I-Apollo21
Ngithanda ukusho ukubonga ngakho konke ukulandwa kwamahhala okunikezwayo, ngisebenzise isayithi lakho izinyanga ezimbalwa futhi ngifanele ngikubonge ngaphambilini kodwa njengalokho phakathi kwezinye izinto yilokho kuyi-ebay ngokuvamile ebheka izindiza njll. ngibheka omunye umuntu odayisa (i-Freeware Aircraft) ukuze ngimthumelele futhi ngibuze ukuthi beyi-freeware ngempela ngoba nginezindiza ezifanayo ayinikela, futhi wayezibuza ukuthi empeleni babeyi-freeware noma i-payware yena waphendula futhi bathi bangamahhala angasho ukuthi isikhwama samahhala ephaketheni elilodwa. Manje lokhu akubonakali kulungile kimi, ukususa bonke abantu abakhele futhi bakhicilele lezi ndege.
Mhlawumbe akuyona yebhizinisi lami kodwa mina ngokwami ​​ngicabanga ukuthi alikho emthethweni, ngizizwa ngingaqiniseki ukuthi akusiyo ngokomthetho ukuthi angazi ukuthi ngifisa ukuxwayisa abantu mayelana nale ndiza yonke kuma diski ayatholakala eRiyoo noma amanye kwezinye izingosi zokulanda.